Migration haziri mbuso agha | Apg29
Migration haziri mbuso agha
Dị ka Czech President Milos Zeman si Mbugharị si Middle East na Europe haziri ahazi mbuso agha.
Ọ na-adịghị na-agụnye ná mkpali-efegharị efegharị nke gbara ọsọ ndụ ọ pụtara doro anya n'ihi na ọtụtụ migrants onye na-abata na Europe na-adịghị ọbụna Siria, na-enweghị bịarutere site na ebe e nwere ndị mba esemokwu.
Nke a pụrụ ịgụnye haziri akụ na ụba Mbugharị, kamakwa ihe haziri okpukpe Mbugharị, ebe ebumnuche bụ na-agbasa Islam na Muslim ọdịbendị na Europe.
Ọzọkwa, ọ pụkwara ịbụ ụzọ ka Isis infiltrate Europe na-eyi ọha egwu, ihe anyị na-ama nwere mgbe dịkarịa ala abụọ na nke Paris-eyi ọha egwu na-na-akpọ "gbara ọsọ ndụ".
Sweden kwesịrị Mbugharị?
Tụkwasị na nke a ọ nwere ike sị na gburugburu ebe obibi na-eje ozi Esa Romson (MP) kwuru na N'ajụjụ ọnụ na-elekwasị anya nke ọchịchị ugbu a kwesịrị ịbụ na budata dịkwuo Sweden n'ikuku ike n'ihi na mgbapu na mba ọzọ ezinụlọ, dị ka "Sweden kwesịrị mbata na ọpụpụ."
Ka anyị nye ha Jesus
2016, na-a oké oge. Anyị mkpa karịa mgbe ọ bụla na e kenyere ndụ Jizọs na ndị ọzọ karịa mgbe ọ bụla ime ihe niile iji merie mkpụrụ obi ya!
Jizọs hụrụ mmadụ niile na chọrọ onye ọ bụla ịbịa Ya na-azọpụta. - Ọbụna ndị Alakụba na ndị ga-abịa mba anyị.
Ka anyị nye ha Jesus!
Isi Iyi: Czech President: Migration haziri mbuso agha | Esa Romson ga adi dịkwuo mgbapu mbata na ọpụpụ Sweden